FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA-A-TZU - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika-A-Tzu
Cocker Spaniel / Shih Tzu Alika mifangaro
Miles Davis the Cock-a-Tzu (Cocker Spaniel / Shih Tzu mix dog) amin'ny 1 taona sy 15 pounds— 'Miles dia manana toetra mahafinaritra indrindra eto ambonin'ny planeta ary naka fiofanana vilany haingana dia haingana. Saro-pady sy miaro izy, tsara amin'ny ankizy koa! Miles dia manana ny volo Cocker sy ny Shih Tzu eo ambany manaikitra. Miles koa dia manana sofina sy tongotr'akanjo be. '
Tsy alika madio ny Cock-A-Tzu. Lakroa misy eo anelanelan'ny Cocker Spaniel ary ny Shih-Tzu . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Ity ny alikako Tornado, izay Cocker Spaniel sy Shih Tzu mifangaro amin'ny 1 1/2 taona, milanja 22 lbs. lehibe.
'Ity no zanako vavy Cock-A-Tzu antsoina hoe Pippin amin'ny 12 herinandro. Izy dia alika kely mahafatifaty - mahafatifaty ary manana ny toetra Cocker amin'ny fanarahana anao na aiza na aiza alehanao. Mora ny manofana izy - hatreto - dia mianatra baiko haingana amin'ny alàlan'ny fampiasana clicker iray. '
'Snickers dia alika kely mahery setra izay mety ho bitro ihany. Afaka mitsambikina sy mivoaka ny seza, ny latabatra kafe ary ny fandriana saika ambony valahany izy. Ny tanjony manaraka manaraka dia ny mitsambikina sy mivoaka ny tampon'ny kaontera, satria tsy mahatratra ny sisiny fotsiny izy amin'izao fotoana izao, ary manonofy ny lohan'ny bacon mipetraka eo an-tampony.
'Snickers dia tia milalao atsipy amin'ny taolam-bolany, milalao miaraka amin'ny rahalahiny Rocky (a Alika kely Cavalier King Charles ), milalao amin'ny zanako Cassidy, Maggie, Vaughn ary Steele, ary mandro mafana sy fandroana mafana. Manana toetra mitovy amin'ny saka izy indraindray ka milelaka sy manadio tena, toy ny rahalahiny Rocky. '
Snickers the Cock-A-Tzu (Cocker Spaniel / Shih Tzu mifangaro alika)
cavalier mpanjaka Charles spaniel pomeranian Mix
Hannah the Cock-A-Tzu amin'ny 1 taona
'Hannah amin'ny faha-11 volana nijereny fahitalavitra niaraka tamin'ny pal pal tsara indrindra, a Donskoy Sphynx saka . Hannah the Cock-A-Tzu dia mampiseho bebe kokoa ny lafiny Cocker Spaniel miaraka amin'ny loko avy amin'ny Shih Tzu. Ny reniny dia Cocker Spaniel mainty ary ny rainy dia Shih Tzu mena / fotsy. Mitovy bebe kokoa amin'ny totohondry Cocker Spaniel na a izy Cocker Spaniel / Dachshund afangaro fa azoko avy amina mpiompy any Kansas miaraka amina taratasy izy ka azo antoka fa Cock-A-Tzu izy. I Hana dia diva kely sy sakaiza malala. Mampiseho ny tsara indrindra amin'ny karazany sy ny fifaliana azo atao manodidina. Tsy nandatsaka ny palitaony i Hana. '
Hannah the Cock-A-Tzu amin'ny maha alika azy amin'ny 6 volana.
Hannah the Cock-A-Tzu ho alika kely amin'ny 10 herinandro.
Hannah the Cock-A-Tzu ho alika kely 8 herinandro miaraka aminy kilalao .
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Cock-A-Tzu
Cock-A-Tzu Sary 1
jack russell terrier miniature pincher mix
sary alika ondry anglisy taloha
Alika rano portogoisianina 6 volana
sisin-tany collie aostraliana mpiandry ondry heeler mix